[Ukara] Wondershare Dr.Fone for Android - Naghachi Data si gam akporo
Ofụri Esịt dakọtara na Windows 10
Gbalịa Ọ Free Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP Buy Ugbu a
Gbalịa Ọ Free Mac OS X 10.10.3 / 10,9 / 10,8 / 10,7 / 10,6 Buy Ugbu a
Android Data Recovery: Ina Back Echefuola Data na gị android ngwaọrụ Olee otú ọ na-arụ ọrụ
Naghachi ozi, photos, kọntaktị videos na ndị ọzọ si gị android ngwaọrụ. Ma ị na mberede ehichapụ faịlụ ma ọ bụ merụọ gị os site a software melite ma ọ bụ ROM na-egbu maramara, na Android data mgbake nwere ike iweghachi gị kasị mkpa data.
Dị nnọọ 3 Easy Nzọụkwụ
Agbake gị data dị nnọọ na-ewe ole na ole clicks na Dr. Fone si kensinammuo na onye ọrụ-enyi na enyi interface Ele nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu ebe a.
Chebe na-agbake data gị Android ngwaọrụ agba ọsọ na-Android OS, gụnyere igwe na mbadamba si Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, wdg Lee zuru ezu ndepụta nke ngwaọrụ akwado ebe a.
Na-akwado 6000+ Android Ngwaọrụ Ịdị & iche iche Android OS
Dị maka Android ntị na mbadamba si Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, wdg
Akwado ọtụtụ nke Android OS nsụgharị.
Weghachi ozi, kọntaktị, WhatsApp akụkọ ihe mere eme, foto, video, ọdịyo na akwụkwọ gị Android ngwaọrụ.
All gbanyere mkpọrọgwụ Samsung ngwaọrụ na-akwado, n'agbanyeghị Android os.
-Eto n'ike n'ike ndepụta nke na-akwado ngwaọrụ
* Ọ bụrụ na gị Samsung ngwaọrụ bụ adịghị na ndepụta, ị nwere ike kwụsịrị ya site onwe gị wee jiri Android data mgbake naghachi gị ehichapụ Android data.
N'otu n'otu Họrọ ihe Android Files ị chọrọ iji naghachi
Iṅomi ma ịhụchalụ niile kọntaktị, ozi, WhatsApp akụkọ ihe mere eme, foto, akwụkwọ, na ndị ọzọ. Mgbe ahụ nanị họrọ naanị faịlụ na ị chọrọ weghachi.
Gụọ ederede ma ọ bụ iMessages
View Kpọtụrụ Details
Connecet ngwaọrụ gị: Get ngwaọrụ gị jikọọ na kọmputa site na eriri USB.
Ike iṅomi gị na ngwaọrụ: Otu Pịa iṅomi gị ngwaọrụ furu efu data na ya na nke a Android data mgbake software.
Preview Tupu Iweghachite: Ị nwere ike na-amalite Michael hụrụ data otu otu ebe na Doppler amalite.
Selectivetly Naghachi Data: Ị nwere ike naghachi ọ bụla data ị chọrọ n'aka Doppler N'ihi na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Nyocha ahịa anyị Na Dr.Fone for Android - na ị ga-, Oke
Ka 14,2015 3:33 am
site ma ọ bụ
Ka 13,2015 8:02 am
Gịnị mere m naanị ike iṅomi na foto na vidiyo?
Nwere ike Dr.Fone for Android nkwado wụnye na gam akporo ngwaọrụ?
Gịnị mere ngwaahịa echetara m na-ekwe ka Superuser rịọ?
Enwere m ike naghachi data si a ngwaọrụ na unofficial Rom?
Olee otú Naghachi ehichapụ Data si Samsung n'Ụrọ
Olee otú Naghachi FB Ozi na Android
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi ederede site na Android Devices
A zuru ngwọta naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12, iOS 9, iPhone 6s na iPhone 6s Plus Mụtakwuo